Nhau - Excavator yakawanda-nzira vharuvhu zvikamu mutengo-XCMG yekuchera zvikamu zvemusika-Imba Yezvinhu
Excavator yakawanda-nzira vharuvhu zvikamu mutengo-XCMG excavator zvikamu zvemusika-Imba Yezvinhu
Munguva pfupi yapfuura, vatengi vazhinji vari kubvunza nezve mutengo weakawanda-nzira vharuvhu zvishongedzo zvekuchera. Vamwe vatengi vanofunga kuti chitaurwa chanyanya kudhura, nei chisingakwanise kunge chakachipa? Kune peni uye peni, iyo yakawanda-nzira vharuvhu yeImba yeKuchenesa ndeye mhando yakanaka. Ichi ndicho chivimbiso chakanakisa chevatengi.Tichiri kunetsekana nemutengo, isu tinofanirwa kufunga nezve mhando uye mushure-kutengesa, kuti tirege kurasikirwa nezvinhu zvikuru.
Yechokwadi yepakutanga Kawasaki XCMG excavator yakawanda-nzira vharuvhu, brand: Kawasaki, nzvimbo yekwakabva: Japan, inoshanda modhi: XE370CA, modhi: KMX32N / B45012B, kodhi yezvinhu: 803007126, imba yeiyo yakachena XCMG excavator zvikamu zvemusika, uchishandisa yakakosha kukanda, Compact chimiro, kugadzikana kuita, kugadzirisa kuri nyore uye kushandisa, zvakachena zvishongedzo, kuvimbiswa kwemhando yepamusoro. Runhare runhare: +86 1805224003
Ndiani asingade kutenga zvemhando yepamusoro zvikamu zvakanaka senge yakawanda-nzira vharuvhu zvishongedzo zvekuchera? Iko kushandiswa kwekunyepedzera uye kwakaderera zvishongedzo kuchakanganisa mashandiro emuchina, uye inogona zvakanyanya kupfupisa hupenyu hwemuchina. Nekudaro, pane mienzaniso mizhinji kwazvo yezvinhu zvekunyepedzera zvinomira sezvinhu zvechokwadi pamusika. Izvo zvakaoma kusiyanisa chokwadi uye nhema kubva pakuonekwa. Vatengi vachatenga-tenderera vasati vatenga, uye havazove vanokara sarudzo diki uye dzakachipa dzemitengo yakadzika kwazvo yemidziyo. Sekureva kunoita chirevo: chete kana paine nzvimbo, sarudza anovimbika mupiki wezvigadzirwa zvekuchera kuti utenge chakavimbika chakavanzika. Machine zvishongedzo.
Wuzhijia chepakutanga excavator zvikamu zvemusika, kana iwe uchifarira kana uine mibvunzo nezve pamusoro apa excavator yakawanda-nzira vharuvhu accessories, ndapota fona: +86 18052224003, Wuzhijia —— tarisa · nyanzvi · shasha.
Post nguva: Jun-16-2020